सैतान को हो?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उम्बुन्डु उरुन्ड् एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओसेसियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसी किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डेनिश ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली न्यानेका पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बुल्गेरियन भियतनामिज मङ्ग (ह्वाइट) मझतेक (हुआट्ला) माम माया मालागासी मिजो मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन रारोतोंगान रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वायुनाइकी वारे-वारे शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
आवरण लेख | के सैतान वास्तविक व्यक्ति हो?
के सैतान दुष्ट्याइँको प्रतीक मात्रै हो?
बाइबलमा चर्चा गरिएको सैतान केवल दुष्ट्याइँको प्रतीक हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु सजिलो होला। तर के साँच्चै बाइबलले यस्तै सिकाउँछ? यदि यसो हो भने सैतानले येशू ख्रीष्ट र सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरसित कुरा गरेको विवरण बाइबलमा किन लेखिएको छ त? दुइटा विवरण विचार गर्नुहोस्।
सैतानले येशूसित गरेको कुराकानी
येशूले आफ्नो प्रचारको काम थाल्नुहुँदा सैतानले तीनवटा परीक्षाद्वारा उहाँलाई प्रलोभनमा पार्न खोज्यो। पहिलो, परमेश्वरले दिनुभएको शक्तिलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अर्थात्‌ आफ्नो भोक मेटाउन प्रयोग गर्नुहोस् भनेर सैतानले येशूलाई दबाब दियो। दोस्रो, त्यसले येशूलाई आफ्नो जीवन नै खतरामा पार्ने मूर्ख काम गरेर अरूको ध्यान आफूतिर खिच्न उक्सायो। अन्तमा येशूले त्यसलाई एक चोटि मात्र ढोगे पनि संसारका सबै राज्य उहाँलाई दिन्छु भनेर सैतानले लोभ देखायो। तर येशूले हरेक चोटि धर्मशास्त्रबाट उद्धृत गर्दै सैतानको तीनवटै प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नुभयो।—मत्ती ४:१-११; लूका ४:१-१३.
येशू यहाँ कोसित कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो? आफूभित्रै भएको दुष्ट्याइँसित हो कि? बाइबलमा येशू “हर तवरमा परीक्षित तर पापरहित हुनुहुन्छ” भनेर बताइएको छ। (हिब्रू ४:१५) बाइबलमा यसो पनि भनिएको छ: “उहाँले एउटै पाप गर्नुभएन अनि उहाँको मुखमा कुनै छल पाइएन।” (१ पत्रुस २:२२) हो, येशू त्रुटिरहित हुनुहुन्थ्यो; उहाँ सधैं परमेश्वरप्रति वफादार रहनुभयो। उहाँले कहिल्यै आफूमा नराम्रो गुण विकास हुन दिनुभएन। त्यसैले येशू आफूभित्र भएको कुनै दुष्ट्याइँसित नभई एक जना वास्तविक व्यक्तिसित कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा स्पष्ट छ।
यही कुराकानीमा सैतान वास्तविक व्यक्ति हो भन्ने कुराको अरू प्रमाण पनि पाउन सक्छौं।
याद गर्नुहोस्, सैतानलाई ढोगेको खण्डमा त्यसले येशूलाई संसारका सबै राज्य दिन्छु भनेको थियो। (मत्ती ४:८, ९) यदि सैतान वास्तविक व्यक्ति नभएको भए यो प्रस्तावको कुनै अर्थ हुने थियो र? अहँ! थिएन। साथै येशूले पनि संसारका सबै राज्यमाथि सैतानको अधिकार छ भन्ने कुराको खण्डन गर्नुभएन।
येशूले ती प्रस्तावलाई तिरस्कार गर्नुभएपछि सैतानले ‘अर्को अनुकूल मौका नपाउन्जेलसम्मका लागि उहाँलाई छोडेर गयो।’ (लूका ४:१३) यो कुरा विचार गर्दा सैतान एउटा खराब गुण मात्रै हो भन्न त पटक्कै मिल्दैन। बरु त्यो एउटा हार नमान्ने शत्रु हो भनेर थाह पाउन सक्छौं।
यो कुरा पनि विचार गर्नुहोस्, सैतानले येशूलाई छोडेर गएपछि “स्वर्गदूतहरू आएर उहाँको सेवा-सुसार गर्न लागे।” (मत्ती ४:११) के येशूलाई प्रोत्साहन दिन र मदत गर्न आएका ती स्वर्गदूतहरू वास्तविक अदृश्य व्यक्तिहरू थिए? अवश्य! त्यसोभए सैतान चाहिं वास्तविक व्यक्ति होइन भन्न सक्ने कुनै आधार छ त?
सैतानले परमेश्वरसित गरेको कुराकानी
अब हामीले छलफल गर्न लागेको बाइबल विवरणमा परमेश्वरको डर मान्ने अय्यूब नाम गरेका एक जना व्यक्तिबारे चर्चा गरिएको पाउँछौं। सैतानले परमेश्वरसित दुई पटक कुराकानी गरेको थियो। दुवै चोटि परमेश्वरले अय्यूब उहाँप्रति वफादार भएको कारण तिनको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। तर अय्यूबले आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र परमेश्वरको सेवा गर्दै छ भनेर सैतानले दाबी गऱ्यो। एक अर्थमा परमेश्वरले अय्यूबको वफादारी किन्दै हुनुहुन्छ भनेर सैतानले बताइरहेको थियो। यसरी त्यसले अय्यूबलाई परमेश्वरले भन्दा पनि राम्ररी चिनेको दाबी गऱ्यो। यहोवा परमेश्वरले सैतानलाई अय्यूबको धनसम्पत्ति, छोराछोरी र स्वास्थ्यमाथि विपत्ति ल्याउन अनुमति दिनुभयो। * आखिरमा अय्यूब वफादार छन्‌ भनेर यहोवाले भन्नुभएको कुरा सही साबित भयो। अनि सैतान चाहिं झूटो हो भनेर प्रमाणित भयो। अय्यूब वफादार रहेकोमा परमेश्वरले तिनलाई आशिष्‌ दिनुभयो।—अय्यूब १:६-१२; २:१-७.
परमेश्वर र सैतानबीचको यो कुराकानीमा के यहोवा परमेश्वर आफूभित्रको दुष्ट्याइँसित कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र? बाइबलमा यस्तो बताइएको छ: “परमेश्वरको मार्ग सिद्ध [अर्थात्‌ त्रुटिरहित] छ।” (२ शमूएल २२:३१) परमेश्वरको वचनमा अझै यसो भनिएको छ: ‘सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर यहोवा पवित्र, पवित्र, पवित्र हुनुहुन्छ।’ (प्रकाश ४:८) पवित्र शब्दको अर्थ शुद्ध, चोखो र पापरहित हो। यहोवा परमेश्वर कुनै अवगुण नभएको त्रुटिरहित व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँमा दुष्ट्याइँ हुनै सक्दैन।
सैतानले परमेश्वरसित गरेको कुराकानीले अय्यूबको जीवनमा असर पाऱ्यो
कसै-कसैले अय्यूब वास्तविक व्यक्ति थिएनन्‌, त्यसैले यो सम्पूर्ण कुराकानीको विवरण प्रतीकात्मक मात्र हो भन्ने धारणा राख्छन्‌। तर के यो कुरा तर्कसङ्गत छ र? बाइबलका अरू किताबहरूले पनि अय्यूब वास्तविक व्यक्ति थिए भनेर पुष्टि गर्छ। उदाहरणका लागि, याकूब ५:७-११ मा ख्रीष्टियनहरूलाई गाह्रो समयमा सहनशील हुनको लागि प्रोत्साहन दिन र सहनशील हुँदा परमेश्वरले इनाम दिनुहुन्छ भनेर सान्त्वना दिन अय्यूबको उदाहरण चलाइएको थियो। यदि अय्यूब वास्तविक व्यक्ति थिएनन्‌ र सैतानले तिनीमाथि ल्याएको विपत्ति काल्पनिक मात्र थियो भने अय्यूबको उदाहरण चलाउनुको केही महत्त्व हुने थिएन। साथै इजकिएल १४:१४, २० मा हेर्ने हो भने परमेश्वरका तीन जना वफादार सेवकको सूचीमा नूह र दानियलसँगै अय्यूबको पनि नाम लेखिएको पाउँछौं। नूह र दानियल जस्तै अय्यूब पनि परमेश्वरमा बलियो विश्वास भएको वास्तविक व्यक्ति थिए। अय्यूब वास्तविक थिए भने तिनीमाथि विपत्ति ल्याउने व्यक्ति पनि वास्तविक थिएन होला र?
बाइबलमा सैतान वास्तविक अदृश्य व्यक्ति हो भनेर स्पष्टसित बताइएको छ। तर तपाईं सोच्नुहोला, ‘त्यसोभए के अहिलेको आधुनिक संसारमा पनि सैतानले म र मेरो परिवारलाई हानि पुऱ्याउन सक्छ?’
अहिले संसारको अवस्था कस्तो छ?
कल्पना गर्नुहोस्, एक्कासि अपराधीहरूको एउटा समूह तपाईं बस्ने सहरमा बसोबास गर्न आउँछ। पक्कै पनि यस्तो अवस्थामा तपाईं असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ। अनि छरछिमेकमा मानिसहरूको नैतिकता पनि खस्किन्छ। अब त्यस्तै एउटा घटनाबारे विचार गर्नुहोस्। सैतान र त्यसका दुष्ट स्वर्गदूतहरू (सैतान जस्तै वास्तविक अदृश्य व्यक्तिहरू, जसले परमेश्वरको विरोध गरे) एक्कासि पृथ्वीमा फ्याँकिएका छन्‌। परिणाम के भएको छ? समाचार हेर्दा तपाईं आफ्नै वरिपरि र संसारभरि के भइरहेको देख्नुहुन्छ, विचार गर्नुहोस्:
विश्वव्यापी रूपमा अमानवीय र हिंसात्मक कामहरू रोक्न जत्ति नै प्रयास गरिएको भए तापनि यस्ता कामहरू झन्‌झन्‌ बढिरहेको के तपाईं देख्नुहुन्छ?
थुप्रै बुबाआमाले तन्त्रमन्त्रसित सम्बन्धित मनोरञ्जनको विरोध गरे तापनि यस किसिमको मनोरञ्जन व्यापक रूपमा फैलिंदै गएको के तपाईं देख्नुहुन्छ?
असल मनसाय भएका मानिसहरूले वातावरणलाई जोगाउन जत्ति नै प्रयास गरे तापनि मानिसहरूले निरन्तर वातावरण विनाश गरेको के तपाईं देख्नुहुन्छ?
के तपाईंलाई मानव समाजमा कतै न कतै गम्भीर समस्या छ; मानिसहरूलाई ठूलो विपत्तितर्फ धकेलिरहेको एउटा अदृश्य शक्ति छ जस्तो लाग्छ?
बाइबलमा यस्ता सबै समस्याहरूको पछाडि कसको हात छ भनेर बताइएको छ। बाइबल यसो भन्छ: ‘दियाबल अनि सैतान भनिने र सारा संसारलाई ठग्ने त्यो ठूलो अजिङ्गर अर्थात्‌ पुरानो सर्पलाई तल पृथ्वीमा फालियो अनि त्यो सँगसँगै त्यसका स्वर्गदूतहरू पनि फालिए। पृथ्वी र समुद्रलाई धिक्कार छ, किनकि दियाबल तल तिमीहरूकहाँ आएको छ अनि आफ्नो समय थोरै मात्र बाँकी भएकोले त्यो असाध्यै रिसाएको छ।’ (प्रकाश १२:९, १२) यस्ता प्रमाणहरूलाई विचार गरिसकेपछि धेरै मानिसहरू सैतान सारा संसारलाई प्रभाव पार्ने एउटा खतरनाक अदृश्य व्यक्ति हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्‌।
त्यसोभए हामी कसरी सुरक्षित हुन सक्छौं त? सायद तपाईंको मनमा यो प्रश्न उठ्यो होला। यसरी चिन्तित हुनु जायज हो। सुरक्षित रहनको लागि हामीले चाल्न सक्ने केही व्यावहारिक कदमहरूबारे यसपछिको लेखमा चर्चा गरिएको छ।
^ अनु. 12 बाइबलअनुसार परमेश्वरको नाम यहोवा हो।
Text डिजिटल प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा नोभेम्बर २०१४ | वास्तवमा सैतान के हो?